Famerenana mini HomePod: kely nefa mpampijaly | Vaovao IPhone
Luis Padilla | | HomePod, maro
Apple dia namoaka ny mini HomePod nandrasana hatry ny ela, kinova kely an'ny HomePod tany am-boalohany izay gaga amin'ny fahombiazany sy ny kalitaon'ny feo tsy mety an'ny mpandahateny ny habeny sy ny vidiny. Izahay dia mizaha toetra azy ary milaza aminao momba izany.
1 Fanamboarana ny olan'ny HomePod
2 Volavola sy famaritana
3 Mihaino mozika
4 HomeKit amin'ny HomePod mini
6 Kalitaon'ny feo mahatalanjona
7 Filokana lehibe avy amin'i Apple
Fanamboarana ny olan'ny HomePod
Nalefa efa ho telo taona lasa izay, ny HomePod dia mpandahateny iray izay efa nankasitrahana hatrany am-piandohana noho ny kalitaon'ny feo, fa notsikeraina ihany koa noho ny vidiny. Tonga tany Espana efa ho herintaona taty aoriana ho an'ny € 349, vidiny iray izay nahena ho 329 € taty aoriana, izay nametraka azy tamina mpandahateny avo be. Ity fanasokajiana ity dia tsy mendrika, satria ny kalitaon'ny feo no nanamarinana azy, saingy ny vidiny dia namela azy ivelan'ny tsena ho an'ny mpampiasa maro, ary noho izany dia nandao an'i Apple tamin'ny tontolon'ireo mpandahateny mahay satria tsy misy safidy hafa. Feo tsara, afovoan'ny HomeKit, mpanampy virtoaly tafiditra, miaraka amin'ny tombony sy fatiantoka rehetra an'ny Siri, fampidirana tonga lafatra ao amin'ny ekosistra Apple… fa amin'ny vidiny lafo.
Elaela, nohatsaraina i Siri ary nosokafan'ny Apple ho an'ny rindranasa sy serivisy an'ny antoko fahatelo ny HomePod, izay nahatonga ny HomePod ho fitaovana manintona kokoa, fa misy safidy hafa mora vidy kokoa hita ho tena ilaina tokoa, ka noho izany tsaho efa amam-bolana maro dia namoaka ny mini-HomePod i Apple. Ity mpandahateny kely ity dia mamaha ireo olana rehetra ireo amin'ny HomePod tany am-boalohany, satria Amin'ny fitazonana ny asan'ny HomePod feno, dia mihena ho 99 € ny vidiny, ary na dia miharihary aza (sy lojika) ny mahasamihafa ny feo, ny kalitaony dia ambony noho ny an'ny mpandahateny hafa mitovy habe sy vidiny.
Volavola sy famaritana
Apple dia nanova ny endrika, fa mitazona ny fotony. Ny mini HomePod dia sehatra kely fisaka amin'ny bao, rakotra harato lamba mitovy amin'ny zokiny lahy. Any an-tampony isika dia manana ny velarana mikasika izay mifehy toy ny fanaraha-maso ara-batana, miaraka amin'ireo LED mamirapiratra izay manondro ireo fanjakana samihafa (playback, call, Siri, sns). Ao anatiny misy mpandika teny feno iray misy taratra radiatera miisa roa, tena tsy mitovy amin'ny HomePod tany am-boalohany, miampy mikrô efatra mba haka ny feontsika. Ny processeur S5 (mitovy amin'ny an'ny Apple Watch Series 5) dia tompon'andraikitra amin'ny famakafakana ny feo 180 heny isan-tsegondra mba hanomezana anay ny feo tsara indrindra.
Ny fifandraisany dia WiFi (2,4 sy 5GHz), ary na dia manana Bluetooth 5.0 aza izy dia tsy azo ampiasaina handefasana feo, fa saika tsy misy mahatadidy an'izany intsony, zavatra notsikeraina mafy tamin'ny maodely voalohany. Ny kalitaon'ny feo ary ny mety atolotry ny WiFi sy ny protokol AirPlay 2 an'ny Apple dia taona vitsivitsy miala amin'ny zavatra azontsika atao amin'ny alàlan'ny Bluetooth, ary raha te hampiasa ny HomePod tsy misy Internet isika dia afaka manao azy tsy misy sakantsakana. Izy io koa dia misy puce U1 izay havoakantsika avy eo hoe inona izany, ary mifanaraka amin'ny Thread, protokolota vaovao hanatsara ny fifandraisan'ireo fitaovana mandeha ho azy ao an-trano ananantsika.
Ny votoatin'ny mpandahateny dia mozika, na dia miaraka amina mpandahateny marani-tsaina aza ity asa ity dia mety ho toa sisa tavela. Manomboka amin'ny fotoana nahavitanao nanangana HomePod, izay maharitra minitra roa dia afaka manomboka mankafy ny mozikao ianao. Mora kokoa raha manana Apple Music ianao, mazava ho azy, satria tsy mila ny iPhone-nao mihitsy. Azonao atao ny mangataka an'i Siri hilalao ny rakikira tianao, ny playlists na ny gara manokana mifototra amin'ireo mpanakanto tianao indrindra. Raha mampiasa serivisy mozika streaming hafa ianao, ny vaovao tsara dia ny hoe efa nanokatra ny HomePod i Apple mba hahafahan'izy ireo miditra, na dia hiankina amin'ny serivisy manao izany aza ny rehetra. Azo antoka fa mieritreritra momba Spotify ianao, izay efa nitomany teny am-baravarana nandritra ny volana maro satria tsy azo ampidirina ao amin'ny HomePod, noho izany antenaina fa tsy haharitra ela vao hifanaraka.
Raha te-hihaino mozika amin'ny serivisy tsy mifanaraka ianao dia azonao atao izany tsy misy olana kely akory, fa tsy maintsy ataonao amin'ny iPhone, iPad na Mac anao izany ary mandefa ny mozika amin'ny alàlan'ny AirPlay. Tsy olana goavana io fa very ilay majika fampidirana izay ananan'ny Apple Music. AirPlay 2 dia mamela anao hampiasa mpandahateny avy amin'ny efitrano samihafa miaraka (multiroom) ihany koa, mifehy azy rehetra toy ny hoe iray izy ireo, miaraka amin'ny mozika mifangaro tanteraka, na koa mandefa audio isan-karazany amin'izy ireo. Misy ihany koa ny mety hanambarana minis HomePod roa hamoronana mpivady stereo, manatsara be indrindra ny traikefa fihainoana. Ny tsy azonao atao dia ny manambatra mini HomePod miaraka amin'ny HomePod, mazava ho azy. Ho fanampin'izay, ankehitriny ny Apple TV dia mamela anao mamaritra ny output audio ho an'ny HomePod, izay nanampy ny fifanarahana tamin'i Dolby Atmos dia afaka mamadika ny mini-nao HomePod ho vahaolana tsara amin'ny feon'ny fahitalavitrao, latsaky ny € 200.
Apple dia nihatsara tamin'ny endri-javatra izay vao haingana no nanampy tamin'ny HomePod tany am-boalohany: mamindra feo avy amin'ny iPhone. Amin'ny fitondrana ny iPhone ho eo an-tampon'ny HomePod, ny audio henonao amin'ny findainao finday dia hampitaina amin'ny mpandahateny fa tsy mila manao na inona na inona. Izany no fomba fijeriny amin'ny teôria, ary rehefa miasa dia majika, fa amin'ny fampiharana dia tsy mahomby matetika izy io. Ny mini HomePod dia misy puce U1, toy ny maodelin'ny iPhone 11 sy ny manaraka. Misaotra an'io, ny famindrana dia 99,99% amin'ny fotoana faranyEnto fotsiny ny tampon'ny iPhone hanakaiky ny tampon'ny mini HomePod, ary ny audio dia hiakatra avy any amin'ny iPhone mankany amin'ny HomePod na ny mifamadika amin'izany dia afaka fotoana fohy.
HomeKit amin'ny HomePod mini
Ny iray amin'ireo asan'ny HomePod izay tsy misy ifandraisany amin'ny mozika dia ny ivon-toeran-jiro ho an'ny HomeKit. Izany no tranga misy amin'ny HomePod mini koa, raha ny marina dia io no ivontoerana kojakoja mora vidy indrindra azonao vidiana izao, ary mahaliana Izy io koa no singa fifehezana tsara indrindra azonao vidiana izao. Apple dia nanampy fanampiana ny protokol Thread hanatsarana ny fifandraisana amin'ny kojakoja HomeKit, mba hahafahanao manadino ireo tetezana sy mpamerina hamaha ireo olana momba ny fandrakofana.
Fifandraisan'ny HomePod Mini sy ny kofehy: hadinoy ny mpamerina sy ny tetezana
Ny fifehezana HomeKit amin'ny alàlan'ny HomePod no tanjak'i Siri lehibe. Ny fizotran'ny Apple dia tsy azo resena amin'ny fifaninananaToy ny hoe mividy ny marika novidinao ianao, raha manana fanamarinana HomeKit dia hiasa eny na eny, ary mitovy amin'ny marika hafa ihany, zavatra iray (ho ahy) no olana lehibe ho an'i Amazon sy Alexa. Tsy misy fahaiza-manao eto, tsy mila miandry ny mpamorona handefa ny kinova Espaniôla ianao, tsy misy tsy ampoizina. Raha misy vokatra manana ny tombo-kase "HomeKit" dia handeha fotsiny izany. Ary Siri amin'ny fifehezana ny automatique an-tranonao dia tanteraka tanteraka. Azontsika atao ny miady hevitra momba ny iza no mpanampy mandroso indrindra, ilay milaza ny sangisangy tsara indrindra na ilay lalaovinao amin'ny lalao tsara indrindra, fa rehefa mandeha ho azy ao an-trano… tsy misy loko.
Siri koa dia manana asan'ny mpanampy, ary eto koa dia manao ny asany tsara, raha manana iPhone ianao, mazava ho azy. Ny fampiasana ny serivisy Apple dia mahatonga an'i Siri hanana fidirana amin'ny kalandrie, naoty, fampahatsiahivana, fifandraisanao sns.. Afaka miantso ianao, mamaly azy ireo, mandefa hafatra, mahalala ny toetrandro, manomana ny làlanao hiasa, mamorona ny lisitry ny varotrao ... Ireo rehetra ireo dia asa izay tsy araraotinao amin'ny HomePod, mandra-pahatongan'ny iray andro andramanao izy ireo ary tsapanao fa mampionona ny fampiasana Siri amin'izany. Eny, tsy maintsy ekentsika fa raha miala amin'ireo asa nolazaiko ireo isika, Siri no ao ambadiky ny fifaninanana: tsy afaka manafatra pizza ianao, na mividy tapakila mankany amin'ny sinema, ary tsy afaka manafatra ranomanitra ankafizinao any Amazon, na milalao Trivial Fanenjehana. Raha ilaina ho anao ireo asa ireo dia jereo any ivelan'ny Apple, satria tsy ho hitanao eto izy ireo. Saingy rehefa afaka efa ho 3 taona ny fampiasana HomePod, ary mihoatra ny roa miaraka amin'ny Amazon Echos maromaro ao an-trano (mihena ny kely), ny fahasosorako amin'i Alexa dia lehibe kokoa noho i Siri, resaka fahazarana.
Kalitaon'ny feo mahatalanjona
Izao no fotoana hiresahana ny feon'ny mini HomePod, ny tanjany lehibe. Raha tsy manana mpandahateny toa ny HomePod na mitovy ao an-trano ianao dia ho talanjona amin'ny feo. Raha efa manana HomePod ianao ary efa zatra ny kalitaony dia mazava ho azy fa ho kely kokoa ny fahagagana, fa hisy ihany koa. Noho ny hakelezany dia tsara ny kalitaon'ny feo. Tsy azo ampitahaina amin'ny HomePod izy, na tsy akaiky azy akory, fa ny fahefana, ny nuances, ny bas ... ity HomePod mini ity dia tsy handiso fanantenana anao. Na dia 100% aza ny volavola, izay omen'ny Siri ny tenany hevitra hanohitra azy raha tsy manontany ianao, dia tsy misy fanodikodinana "tsy misy peta" araka ny nolazain'ny zanako lahy. Mazava ho azy fa amin'io volanao io dia tsy ho azonao ny mitazona ny mpiara-monina aminao. Goavana tokoa ny fahefan'ity mpandahateny ity, zava-dehibe ny bas ary na dia tsy tsikaritrareo aza ny "habetsahan'ny nuances" an'ny HomePod, vitanao ny manavaka ny feo sy ny zavamaneno ... na dia tsy tokony hohadinointsika mihitsy aza ny habeny sy ny fetrany miharihary.
Filokana lehibe avy amin'i Apple
Ilay Apple ihany izay manala ny charger amin'ny iPhone mitentina mihoatra ny € 1000 dia afaka mandefa mpandahateny an'ity kalitao ity ho an'ny € 99 fotsiny, ary ampidiro ao anaty boaty ilay charger. Izy ireo no fifanoheran-kevitra mahazatra izay efa nahazatra antsika ity orinasa ity, ary mampiseho fa goavana ny filokana namboariny tamin'ity HomePod mini ity, fanaovana azy ho iray amin'ireo vokatra manana sandany vola tsara indrindra amin'ny katalaogin'ny orinasa manontolo, na dia avy eny an-tsena aza dia azontsika lazaina akory. Raha mpampiasa iPhone ianao, raha te hanomboka amin'ny automatique an-trano, na raha tianao fotsiny ny kalitaon'ny feo amin'ny mpandahateny iray, ity HomePod mini ity dia tena sarotra ny manohitra azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » HomePod » HomePod Mini famerenana: bitika nefa mpampijaly
Ny app Gmail dia mandray widgets